Soosaarayaasha Siemens PLC - Shiinaha Siemens PLC Factory & Alaab-qeybiyeyaal
SIMATIC ET 200 Qeybiye IO
SIMATIC ET 200 waxay siisaa xalka ugu fiican dhammaan codsiyada
SIMATIC ET 200 wuxuu leeyahay xulasho hodan ah oo ah nidaamyada I / O ee loo qaybiyey oo loo adeegsan karo kabadhada kontoroolka ama tooska mashiinka iyada oo aan lahayn kabadh kontorool ah, ama loo adeegsan karo aagagga meelaha halista ah. Naqshadeynta qaabdhismeedka ah ayaa kuu oggolaanaysa inaad si fudud oo dhakhso leh Isku hagaaji oo dheeree nidaamka ET200. Moodellada dheeraadka ah ee la isku daray waxay yareyn karaan kharashka iyagoo ballaadhinaya kala duwanaanta dalabka.Waxaad kala dooran kartaa dhowr isku-darka kala duwan: dijitaalka iyo wax soo saarka analogga / wax soo saarka, noocyo caqli leh oo leh CPU, nidaamyada amniga, mootooyinka bilawga ah, unugyada pneumatic, rogayaasha soo noqnoqda, iyo noocyo kala duwan oo farsamooyin farsamo ah (tusaale ahaan, tirinta, meelaynta, iwm.).
GuudmarkaSIMATIC ET 200 wuxuu siinayaa xalka ugufiican dhamaan codsiyadaSIMATIC ET 200 waxay leedahay xulasho hodan ah oo ah nidaamyada I / O ee looqaybiyay oo loo adeegsankaro kabadhada xakamaynta ama tooska mashiinka iyada oo aan lahayn kabadhada kontoroolka, ama in loo isticmaalo aagagga Naqshadeynta qaabdhismeedka ayaa kuu oggolaaneysa inaad si fudud oo dhaqso leh u hagaajiso una ballaadhiso nidaamka ET200. Moodello dheeri ah oo la isku daray ayaa yareyn kara kharashka iyadoo la ballaadhinayo kala duwanaanta dalabka.Waxaad kala dooran kartaa dhowr nooc oo isku-dhafan oo kala duwan: wax soo saarka dhijitaalka ah iyo analogga / wax soo saarka .
Isgaarsiinta iyada oo loo marayo PROFIBUS iyo PROFINET, qaabeynta injineernimada mideysan, awoodaha baaritaanka hufan, iyo isdhexgalka ugu fiican ee u dhexeeya kontoroolka SIMATIC iyo qeybta HMI waxay muujinayaan awooda isdhexgalka gaarka ah ee otomaatiga si buuxda isku dhafan.
Isukeen, fududahay in la isticmaalo, qiime jaban oo loogu talagalay howlaha xakamaynta fudud
Qaab dhismeedka is haysta, fududahay in la shaqeeyo, qalab la'aan ayaa si ballaaran loo isticmaali karaa
Waxyaabaha "All-in-One" oo leh muuqaal isku dhafan iyo guddi hawleed
36 shaqooyin kala duwan ayaa lagu xidhi karaa badhanka badhanka ama barnaamijka kombiyuutarka PC; Waxaa loo isticmaalay in ka badan 130 jeer
LOGO! 8: 38/43 shaqooyin kala duwan ayaa lagu xidhi karaa badhamada ama isticmaalka kombuyuutarka kombiyuutarka; Ilaa 200/400 jeer
Waad ka beddeli kartaa shaqooyinka saxaafadda batoonka. Dib u cusbooneysiintu waqti badan ma qaadato
Siemens SIMATIC S7-300 alaab-qeybiyaha xakamaynta barnaamij dhexdhexaadka ah
Nidaamka 'PLC micro PLC', si loo buuxiyo shuruudaha waxqabadka ee dhexdhexaad iyo yar
Noocyada waxqabadka kala duwan ayaa aad u fiicnaan kara in lala kulmo oo lala qabsado hawsha xakamaynta otomaatiga ah
Qaab dhismeedka fudud ee wax ku oolka ah loo qaybiyey iyo awoodda isku-xirnaanta isku-xirnaanta badan, codsi waa mid aad u jilicsan
Siemens SIMATIC S7-400 alaab-qeybiyaha xakamaynta barnaamijyada barnaamijka ah
S7-400 waa PLC-da ugu awooda badan qoyska xakamaynta SIMATIC.Wuxuu si guul leh u hirgalin karaa xal otomaatig ah oo isku dhafan (TIA). Astaamaheeda ugu muhiimsan waa qaab dhismeedka qaab dhismeedka iyo keydka waxqabadka.Shirkada Siemens S7-400
SIMATIC S7-1200 alaab-qeybiyaha xakamaynta yar ee programmable-ka ah
SIMATIC S7-1200 CPU-yada
Xakamaynta qaabdhismeedka 'SIMATIC S7-1200' ayaa udub dhexaad u ah bixinta aan siinno howlaha otomatiga ee fudud laakiin aad u saxsan. Xakamaynta SIMATIC S7-1200 waa mid qaabeysan oo is haysta, iswaafajin kara, maalgashi aamin ah, kuna habboon dhammaan dalabyada kala duwan.
Dhexe iyo hooseeyo xakamaysada is haysta Shirkada Siemens S7-1200PLC
Qaab-dhismeed, la ballaarin karo, nidaam caalami ah oo leh heerka ilaalinta IP20
Xalalka nidaamka ee codsiyada otomatiga ah ee kaladuwan ee otomaatiga khaaska ah
Waxay leedahay waxqabad sare iyo helitaan
Kaliya waxaa lagu qotomi karaa Xariirka Iskudhafka Isku-dhafan ee Tallaabada 7 Xirfadle V12 ama ka dib
Si loo hagaajiyo waxqabadka
Fulinta xawaaraha sare:
Nooca xogta cusub
Baska dambe ee dheereeya